Borussia Dortmund oo u jawaabtay Kooxaha xiiseynaya saxiixa Weeraryahankooda Erling Haaland – Gool FM
Borussia Dortmund oo u jawaabtay Kooxaha xiiseynaya saxiixa Weeraryahankooda Erling Haaland
Haaruun March 15, 2021
(Dortmund) 15 Maarso 2021. Agaasimaha ciyaaraha Borussia Dortmund ee Michael Zorc ayaa digniin u diray Real Madrid, isagoo ku wargeliyey in Erling Haaland aysan u ogolaan doonin inuu kooxda si fudud uga tago.
Xiddiga reer Norway ayaa horumar ballaaran sameeyey, waxaana uu ku soo baxay Weeraryahan mustaqal weyn leh 12-kii bilood ee uu joogay Dortmund, iyadoo la la xiriirinayey dhammaan kooxaha waa weyn ee Yurub bilihii dhowaa.
“Haddii uu go’aansado inuu maalin kooxda ka tago, kaliya waxa ay noqon doontaa inuu kooxo tiro yar aado,” Zorc ayaa sidaas u sheegay Die Welt.
“Laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan sii haysanno muddada ugu dheer ee macquulka ah.
“Marnaba ma arkin qof isaga oo kale ah.”
Barcelona ayaa sidoo kale la la xiriirinayey Weeraryahankan, inkastoo Haaland iyo dadka ku hareereysan ay ku farraxsan yihiin inay sii joogaan dalka Jarmalka, halka ugu yaraan ay meel kale aadi lahaayeen.
Haatan Dortmund waxa ay diiradda saari doontaa inay markale u soo baxdo tartanka Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
“Ma doonayno inaan ka ciyaarno Europa League,” ayuu markale Zorc, waxaana uu intaa raaciyey: “Ma doonayno inaan luminno kaarkeenna ka soo qeyb-galka Champions League.”
Burcad u dhacday guriga Angel di Maria oo af-duubtay xaaska iyo caruurta xiddigan xilli uu ku jiray ciyaartii xalay la garaacay kooxdiisa PSG
Pele oo farriin u diray Cristiano Ronaldo kaddib markii xiddiga Juventus uu jabiyey rikoorka gooldhalineed ee halyeyga reer Brazil